Karazan'orinasa orinasa rongony - mpisolovava amin'ny indostrian'ny rongony - mpisolovava ho an'ny marijuana manana fahazoan-dàlana
Fisafidianana ny orinasanao
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny orinasam-pandraharahana LLC, S-Corp ary C-Corp? Iza amin'ireo no mety amin'ny orinasao? Manombatombana ny orinasanao hatrany ambony ka hatrany ambany izahay ary manampy anao hisafidy karazana orinasam-pandraharahana manatsara izay hahasoa indrindra ny orinasanao rongony.
Safidy orinasam-pandraharahana rongony
Amin'ny fotoana ilanao misafidy entity rongony dia ianao afaka mahita rafitra orinasa telo lehibe izay tsy mitovy amin'ny zonao sy ny adidinao. Amin'ny orinasa rongony, azonao atao ny mandinika orinasa LLC, orinasa C (C-corp), na orinasa S (S-corp). Ireo rafitra telo dia manome tombony anao.
Rehefa manapa-kevitra ianao amin'izay orinasam-pandraharahana hiforona dia tokony handinika ny lafiny rehetra amin'ny orinasa ianao. Ny orinasa dia manolotra safidy fitaterana hetra malefaka manome anao safidy maro isan-karazany handoavana hetra any amin'ny fanjakanao. Miaraka amin'ny LLCs, azonao atao ny miaro ny volanao manokana satria ny haba dia matetika misy fiantraikany amin'ny orinasam-pandraharahana fa tsy ny tompona. Ary koa, ny fomba famoronana orinasa dia haingana sy tsotra kokoa noho ny fananganana orinasam-pandraharahana.
Etsy ankilany, misy endrika orinasa roa izay manana ny tombony. Miaraka amin'ny S-corp, tsy mandoa ny hetra miditra amin'ny orinasa ny orinasa, ary azo arovana ny fananana manokana. Mandritra izany fotoana izany dia manana toetra tsara momba ny hetra ianao amin'ny fidiram-bola ary nitombo ny fitokisana.
Miaraka amin'ny C-corp dia afaka manangona vola mora kokoa ianao ary manana tompon'andraikitra marobe tsy voafetra. Ireo orinasa ireo dia tsy entina mandalo, izay midika fa voaroaka tsy handoa haba ny tompon-trano. Ny orinasa ihany no iharan'ny hetra miditra.
Ny endrik'ireo fikambanana ara-dalàna rehetra dia ao anatin'ny orinasam-panafody rongony any Etazonia, ary ny tompona orinasa dia manapa-kevitra ny hamorona orinasa tsirairay arakaraka ny fitantanan'ny orinasa, ny drafitry ny orinasa ary ny toe-bolany. Azonao atao ny mahazo tombontsoa marobe avy amin'ny orinasa tsirairay, fa tokony hihevitra ny lafy ratsin'ny firafitry ny orinasa koa ianao. Izany no antony ahazoana manontany tena amin'ny mpisolovava anao dia hahazo tombony lehibe eo amin'ny sehatry ny rongony. Miaraka amin'ny mpisolovava rongony marina dia azonao atao ny mandinika ny safidy rehetra ary mahita ny safidin'ny orinasa rongony izay mety indrindra aminao.
Maninona no mampiasa orinasa LLC ho an'ny orinasanao rongony?
Orinasa manana andraikitra voafetra (LLC) dia orinasa misahana rongony rongony misaraka sy miavaka. Miaraka amin'i LLC, afaka mahazo isa fanondroana hetra ianao, ary afaka manokatra kaonty amin'ny banky ihany koa ianao ary manao ny asa amin'ny anaranao. Orinasa manana andraikitra voafetra dia manambatra ny toetoetran'ny orinasa sy ny toetoetran'ny fiaraha-miasa na ny fananana tokana. Izy io dia karazana orinasa tsy miankina voafetra izay mampiasa fitsipiky ny hetra orinasa fa tsy raisina ho fiaraha-miasa. Ao amin'ny orinasam-panafody rongony, LLCs dia manolotra fanamorana betsaka sy fananganana mora kokoa amin'ny orinasa iray.
Inona avy ireo tombontsoan'ny LLCs?
Raha manapa-kevitra ny hanangana orinasa iray ianao, dia ho hitanao fa tsotra kokoa noho izany ny entities hafa. Ny fomba fanao dia tsy "formal" noho ny fanokafana karazana orinasa hafa, ary ny tombony lehibe dia:
• Tatitra momba ny hetra notsorina
• Famoronana mora
• Mihena ny fombafomba ara-dalàna
• Fiarovana amin'ny mpampindram-bola
• Malalaka kokoa
Ny tompon'ny orinasa iray dia manana safidy momba ny fandoavan-ketra malefaka, izay midika fa afaka misafidy ny fomba hanefan-ketra haba ianao. Azonao atao ny mandoa hetra amin'ny anjaranao amin'ny fidiram-bolan'ny orinasa raha mampiasa valiny hetra manokana. Ity dia endrika fandoavan-ketra amin'ny orinasa mpiara-miasa. Etsy ankilany, afaka misafidy haba ianao amin'ny maha orinasa anao, izay manasaraka ny adidin'ny hetra amin'ny tompony. Ireo toe-javatra roa ireo dia mety hahasoa, ary ny safidinao dia miankina amin'ny rafitry ny hetra kasainao hananana ao anatin'ny orinasanao.
LLC koa dia manolotra rafitra fitantanana tena miovaova rehefa mampitaha orinasa iray. Mandritra izany fotoana izany dia manana safidy fitateram-ketra malefaka any amin'ny fanjakana 50 rehetra ianao, ao anatin'izany ny Distrikan'i Columbia. Miaraka amin'ny LLC, manana lafiny tsara hafa koa ianao izay misy ifandraisany amin'ny andraikitra manokana voafetra. Ity karazana tompon'andraikitra voafetra ity dia mifandray amin'ny trosan'ny orinasa sy ny didim-pitsarana manameloka ny orinasa. Ny fanananao manokana amin'ny maha-tompona orinasa anao dia voaro amin'ny trosa na amin'ny fitsarana. Izany no antony anananao zonao hiaro ny volanao manokana rehefa manapa-kevitra ny hamorona safidin'ny orinasa rongony amin'ny endrika orinasa iray ianao.
Raha ny fahaiza-mandanjalanja ny orinasa iray dia orinasa orinasa rongony manintona indrindra ho an'ny ankamaroan'ny olona. Nanao orinasa maro izahay ho an'ny orinasa manerana an'i Etazonia
Inona ny atao hoe Corporation (Inc)?
Ny orinasa dia afaka manana endrika maro. Ny endrika malaza indrindra dia S-corporation (s-corp) izay mitovy amin'ny orinasa LLC amin'ny resaka hetra. Amin'ity tranga ity, ny haba dia "mandalo" amin'ny tompona orinasa tsirairay. Ny S-corp dia orinasa izay nampiasaina tamin'ny endrika orinasa kely talohan'ny nahatongavan'i LLC ho endrika orinasa ara-dalàna. Ny S-corp dia raisina ho toy ny entona "pass-through" satria ny orinasa dia tsy haba. Ny vola miditra rehetra dia taterina amin'ny fandoavan-ketra manokana an'ny tompona.
Inona no tsy mampitovy ny S-corp sy C-corp?
Miaraka amin'ny S-corp, ny tompony dia mandoa hetra amin'ny fidiram-bolan'izy ireo manokana amin'ny tombom-barotra, ary ny orinasa dia tsy tokony handoa hetra amin'ny fidiram-bolan'ny orinasa, izay tsy ny C-corp izay tsy maintsy andoavan'ilay orinasa hetra amin'ny fidiram-bola orinasa. Mandritra izany fotoana izany, ny vola miditra na fatiantoka rehetra dia ampitain'ny tompony isan-taona amin'ny S-corp. Amin'ny endrika S-corp, tsy afaka manana shareholder mihoatra ny 100 ianao raha mampitaha amin'ny C-corp izay tsy misy fetra ny isan'ny tompon-tany. Ny tompon-tany dia tokony ho olom-pirenena amerikana na vahiny monina rehefa manana S-corp ianao.
Ny orinasa hetra amin'ny orinasa C dia tsy mitovy amin'ny vola miditra haba izay haba amin'ny hetra orinasa. Amin'ny toe-javatra rehefa zaraina ny dividends, ny hetra dia hetra amin'ny ambaratonga tsirairay. C-corps dia tsy entina mandalo amin'ny alàlan'ny default.
Amin'ny resaka fanangonam-bola amin'ny alàlan'ny famatsiam-bola isam-batan'olona mifandimby, ny C-corp dia mety ho safidy tsara kokoa noho ny orinasa hafa. Ny fanangonana vola amin'ireo mpampiasa vola andrana dia tsara kokoa ihany koa amin'ny C-corps. Ny orinasa dia manana safidy tsara kokoa raha ny amin'ny fisafidianana ireo karazana mpampiasa vola azon'ny orinasa atao. Toy izany koa, ny orinasa dia manome famporisihana ara-bola tsara kokoa ho an'ny mpiasa izay mitondra tombony lehibe amin'ny famatsiam-bola amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola.
Ny orinasa C no safidy tsara indrindra amin'ny fanangonana vola, fa ny lalàna mifehy ny hetra dia tsy maintsy dinihina am-pitandremana fatratra rehefa misafidy an'ity endrika entity ity. Betsaka ny tranga misy amin'ny "haba roa" raha ny orinasa iray dia iharan'ny hetra amin'ny fidiram-bola amin'ny sehatra entity. Araka ny fantatsika, ambony ny tantara ny tahan'ny hetra ataon'ny orinasa, ary ity karazan-ketra roa sosona ity dia mety hampidi-doza ny tompona orinasa maro.